Nahazo Fialokalofana tao Espaina ihany ilay Lesbiana Nandositra Fanenjehana tao Kamerona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Avrily 2015 8:30 GMT
Vakio amin'ny teny English, čeština , русский, Español
Saripikan'i Christelle Nangnou nopihana tany Kamerona. Nalaina avy tamin'ny eldiario.es araka ny lisansa CC BY-SA 3.0
Tonga tao Madrid tamin'ny 25 marsa teo hitady fialokalofana politika i Christelle Nangnou, tanora lesbiana avy ao Kamerona, noho ny fanenjehana ny pelaka ao an-tanindrazany. Karohin'ny governemanta kameroney izy amin'izao fotoana izao, ary raha voasambotra dia mety handany 10 taona any an-tranomaizina noho ny fironany ara-pitiavana vavy tia vavy.
Araka ny fanambarana ao amin'ny eldiario.es, tonga tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Barajas tamin'ny alalan'ny antota-taratasy hosoka sy tapa-gazety ahitana lahatsoratra milaza fa mikaroka azy ankehitriny ny polisy kameroney satria ampangain'izy ireo ho “mpitarika ny vondrona lesbiana” iray izy. Nanambara ihany koa ilay lahatsoratra fa ny homosexualité dia heverina ho “fombafomba satanika.” Tsy nanaiky ny fangatahiny hialokaloka ny manampahefana espaniola; nilaza ry zareo fa mampisalasala ny fahamarinan'ny tantara lazainy ka nibaiko ny androahana azy.
Christelle Nangnou nampiseho ity lahatsoratra avy amin'ny tapa-gazety ity tamin'ny manampahefana hampisehoany fa lasibatra izy noho ny fironany ara-pananahana. Sary avy amin'ny eldiario.es avy amin'ny fahazoan-dalana CC BY-SA 3.0
Nahazo fanatrehan'ny mpisolovava Eduardo Gómez avy ao amin'ny sampan-draharaha misahana ny lalàna Red Jurídica, hany tokana mahazo alalana hitsidika azy mandritra ny fihazonana azy, i Christelle. Nampakatra ny raharaha tany amin'ny Fitsarana Ambony Nasionaly i Gómez, saingy notsipahina izany. Na izany aza, nitodika tany amin'ny Fitsarana Eoropeana Misahana ny Zon'olombelona, izay nampiato ny fandroahana azy mandra-pazavan'ny raharaha sy nametraka ny fehim-potoana farany hatramin'ny 17 avrily hametrahana ny porofo manamarina ny tantaran'i Christelle, izy. Tontosa io fampiatoana io noho ny fihivingivin'i Christelle tsy nanaiky horoahina mihitsy:
In-telo ry zareo no niezaka hanondrana ahy tao anaty fiaramanidina, saingy nifikitra aho. Maharary ahy daholo ny tenako, mangana ny masoko ankavanana, nisy hoho tafala, ary mahatsiaro fanimpanina aho. Nilaza azy ireo aho fa tsy afaka ny hiverina an-tanindrazako satria tsy afaka ny ho velona any.
Mandritra izany fotoana izany, maro ireo sehatra fampahalalam-baovao namoaka ny raharaha. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (National Federation of Lesbians, Gays, Transexuals and Bisexuales), ireo no nanomboka fanangonan-tsonia tao amin'ny Change.org nangataka tamin'ny minisitry ny atitany hihevitra ny hanome fialokalofana ilay tanora kameroney. Namoaka tweet ny Red Jurídica mitatitra fa nahangona sonia 21000 tao anatin'ny enina ora ilay fanentanana ary mety hahazo sonia mihoatra ny 67.700.
Maro ny mpikambana parlemantera avy amin'ny antoko samihafa no nanery ireo andrim-panjakana hanitsy ny fanapaha-kevitr'izy ireo mitady handroaka an'i Nangnou:
Tamin'ity alarobia ity ny solontena avy amin'ny vondrona parlemantera PSOE, Amaiur, Izquierda Plural, PNV, CiU, UpyD, ary EC no nanana fivoriana tao amin'ny rantsan'ny sampan-draharaha Jeneralin'ny Polisy niaraka tamin'ireo lehiben'ny Biraon'ny Fialokalofana sy ny Sesintany sy ireo manampahaizana avy amin'ny Vaomiera Espaniola Misahana ny Fanampiana ny Mpialokaloka (fantatra amin'ny teny espaniola hoe CEAR) mikaro-bahaolana; ary dia nanapa-kevitra ry zareo ny manao izay ahafahana mamela azy hiditra sy hipetraka eo amin'ny tanim-panampiana mahaolona; lalana iray nametrahana fitokisana ny CEAR.
Nisy vokany ihany ny ezaka natao. Tamin'ny 15 Avrily—24 andro nitazonana azy tao amin'ny seranam-piaramanidina—nanome fahazoan-dalana manokana an'i Christelle Nangnou honina eo amin'ny “tanim-panampiana mahaolona” ny governemanta espaniola.
Na dia iray amin'ny firenena manerantany malalaka indrindra manerantany amin'ny fanajana ny zon'ny LGBT aza i Espaina, dia tsy mirona loatra amin'ny fanomezana fialokalofana kosa ny andrim-panjakana ao aminy. Araka ny tranonkala Cáscara amarga (Hoditra Mangidy):
Patricia Bárcena avy ao amin'ny Vaomieram-Panampiana ny Mpialokaloka Espaniola no nitatitra ny tsy fahaiza-mampihatra ny fitantanana ny fanangona-tsonia fialokalofana ara-politika ao Espaina. Malahelo i Bárcena fa na dia tsy mitaky porofo mahamety idiran-doza aza ny lalàna, rehefa ampiharina, dia izany indrindra no notakiana. “Raha hanaiky fangatahana iray, tsy ilaina hisy fandrahonana manokana mahazo ilay mpitady fialokalofana, fa ny toe-draharaha (misy ady) na fanenjehana vondron'olona izy mety hampidi-doza iny olona iny no jerena,” hoy ny fanazavany.
Colegas, vondrom-pikambanana gay espaniola maromaro, namoaka fanambarana an-gazety mangataka amin'ny governemanta espaniola “hanana fileferana bebe kokoa amin'ny fanomezana fialokalofana ireo LGBT mandositra fanenjehana.” Nilaza ny filohany Paco Ramírez:
Tokony hihevitra ireo mitaky porofo amin'ny mpitady fialokalofana fa matetika ireny olona ireny, ao anatin'ny fandosirana, dia tsy manam-potoana hanangonana porofo hampibaribary ny fanenjehana sy ny fandrahonana mipaka any amin'izy ireny. Mba zavatra mifangarika tanteraka kosa ny fananana Lalàm-pialokalofana manaiky ny fisian'ny fanenjehana eo amin'ny sehatry ny fironana ara-pitiavana sy fijoroana ara-pananahana, nefa manao izay mahasarotra ho an'ireo olona nanavatsava helo, ary maro amin'izy ireo no nahavita nivarotra aina, ho tonga ao amin'ny firenena heverina ho nosin'ny fahafahana sy ny zo isankarazany, nefa mahita avy eo fa mbola tafiditra ao anatin'ny sarotra ataon'ny fanjakam-birao sahaza ny taonjato faha-19.
Ny fanomezan-dalana avy amin'ny governemanta espaniola dia manankery mandra-panapakevitry ny Fitsarana Ambony Nasionaly handrava na tsia ny fandroahana an'i Christelle Nangnou ary hanome fialokalofana farany azy. Nilaza ny Cáscara amarga fa mety haharitra herintaona izany fombafombam-pitsarana izany. Mandritra izany fotoana izany, dia mbola eo ambany fiarovan'ny Vokovoko Mena ihany izy satria na dia afa-monina ara-dalàna ao Espaina aza izy dia tsy mahazo alalana hiasa.